Love O2O ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များပြားခဲ့တဲ့ Love O2O ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အခုချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်နေရတဲ့ Yang Yang ကို လူသိများလာစေတဲ့ ပထမဆုံးသော ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေး ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ –
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားစေတဲ့ အကြောင်းတရားက ဘာပါလဲ ? အလှတရားကြောင့်လား ? ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုကြောင့်လား ? ဒီဇာတ်လမ်းလေးအတွက်တော့ အဲ့နှစ်ခုလုံး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး …
ရှောင်းနိုင် လို့ခေါ်တဲ့ ချင်တက္ကသိုလ်က ကောင်လေးချောချောလေးဟာ ပေဝေဝေ လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးကို မြင်မြင်ချင်း ကြွေသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဟာ ဝေဝေ ရဲ့ အလှတရားကြောင့် မဟုတ်ပဲ Game တစ်ခုကို battle ဆိုင်နေချိန် computer keyboard ပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေတဲ့ ဝေဝေ ရဲ့ လက်ချောင်း သွယ်သွယ်လေးတွေကြောင့်ပါပဲ …
ပေဝေဝေ လို့ခေါ်တဲ့ ချင်တက္ကသိုလ်က computer science မေဂျာရဲ့ Queen လေးက game ကစားရမှာလဲ အရမ်းထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ … တစ်နေ့ သူတို့ကျောင်းက အရမ်းချောပြီး မိန်းကလေးတိုင်း ကြွေရတဲ့ သူတို့မေဂျာက စီနီယာ ရှောင်းနိုင် က Internet Cafe မှာ game battle ဆိုင်နေတဲ့ ဝေဝေ့ ကို အမှတ်မထင် ကြွေမိသွားပါတယ် … အဲ့အခါမှာ ဝေဝေ နဲ့ နီးစပ်အောင်ဆိုပြီး game ထဲကနေပဲ ကြိုးစားချဉ်းကပ်ပါတော့တယ် …
ရှောင်းနိုင် ကလဲ ဝေဝေ တို့ server ရဲ့ Top 1 Player တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ် … အပြင်မှာ မြင်မြင်ချင်းကြွေသွားတဲ့အတွက် game ထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဝေဝေ အချစ်ကိုရအောင် နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုဆက်ပြီး ဉာဏ်များမလဲဆိုတာရယ် , တကယ့် အပြင်မှာရော ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြမလားဆိုတာရယ် ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် …
Main Cast တွေအနေနဲ့ ယခုအချိန်မှာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောလေး Yang Yang က ရှောင်းနိုင် အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး , မင်းသမီးချောလေး Zheng Shuang ကတော့ ပေဝေဝေ နေရာက ပါဝင်ထားပါတယ် …
ပုံမှန် Drama တွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးဟာ game တစ်ခုကို အခြေခံတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ် … မင်းသားမင်းသမီးတွေ game ဆော့ပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့တွေက game ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ် ပြတာကြောင့် costumes အလန်းစားကြီးတွေကိုလဲ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
Rating အရ IMDb မှာ 8/10 နှင့် MyDramaList မှာ 8.7/10 အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ Chinese Drama တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Translator : Pandora Nova & ^Amy^
Starring: Bai Yu, Liu Ying Lun, Mao Xiao Tong, Niu Jun Feng, Ryan Zhang, Vin Zhang, Yang Yang, Zheng Shuang, Zheng Yecheng,
Trailer: Love O2O ( 2016 )